Ciidanka NISA oo rag la tuhunsan yahay ku xiray Magaalada Baydhabo (Daawo Sawirada) – STAR FM SOMALIA
Hawlgal muddo saacado ah qaatay oo Ciidanka Hay’adda Nabad Suggida & Sirdoonka Qaranka (NISA) ka sameeyeen Magaalada Baydhabo, ayaa waxay maanta ku soo qab qabteen rag lala xiriirinaayo Ururka Al Shabaab.
Ciidanka NISA oo hawlgalkan ka sameeyay xaafadda Cunaay, ayaa waxay ku soo qab qabteen rag fara-badan, waxayna si gaar ihi ugala baxeen lix nin oo si dhow loola xiriirinaayo Ururka Al Shabaab.
Inkastoo aan raggan lagu soo qaban wax hub ihi, ayaa waxaa hadana jira tuhun ay laamaha ammaanka ka qabaan raggaasi, waana midda keentay in indhaha laga xir xiro, laguna qaado gaadiidka NISA.
Taliyaha Ciidanka Nabad Suggida Baydhabo, Maxamed Isaaq Ibraahim (Aflow), ayaa waxaa uu sheegay inay aad u tuhmayaan raggaasi, si loo kala cadeeyo waxa ay yihiina, ay ku samaynayaan baaritaano dheeri ah.
Taliyaha, ayaa waxaa uu sheegay inay ka feejigan yihiin weeraro ay Shabaabku ka gaystaan Xarunta Gobolka Baay, sidaasi daraadeedna ay xoojinayaan hawlgaladooda ay kaga hortaggayaan.
Aflow, ayaa dadka deegaanka ku ammaanay sida ay ula shaqaynayaan Ciidanka NISA, iyadoo uu ku booriyay inay laba laabaan wada shaqayntooda, maadaama ay Shabaabku halis ku yihiin nolosha bani’aadamka.
Hawlgalka maanta laga sameeyay Baydhabo, ayaa waxaa uu ku soo aadayaa, xilli Maxkamadda Sare Ciidamada Qalabka Sida, ay maanta markale xukun dil ihi ku riday afartii nin ee loo haystay qaraxyadii dadka badan lagu laayay, ee 28-kii bishii February ka dhacay Bartamaha Baydhabo.